Architecture - Famolavolana
Ny Trano Fonenana
DA AN H HOUSE
Talata 1 Jona 2021
Ny Trano Fonenana Fonenana natsangana amin'ireo mpampiasa. Ny efitrano malalaka amin'ny efitrano anatiny dia mampifandray ny efitrano fandraisam-bahiny, efitrano fisakafoana ary efitrano fianarana amin'ny alàlan'ny fikorontanan'ny fifamoivoizana, ary koa ny maintso sy hazavana avy amin'ny lavarangana. Ny vavahady manokana ho an'ny biby dia mety hahita ao amin'ny efitranon'ny fianakaviana tsirairay. Ny fivezivezena tondra-drano sy tsy voaforona dia vokatry ny famoronana tsy misy fotony. Ny fanamafisana ireo drafitra etsy ambony dia natao hanatratrarana ireo fahazarana mpampiasa, ergonomic ary famoronana hevitra.
Alatsinainy 31 Mey 2021
Salon Hatsarana Ny mpamorona dia mikendry tontolo iainana mahavariana sy manaitaitra ary mamorona sehatra misaraka miaraka amin'ireo fiasa samihafa, izay fotoana mitovy amin'ny rafitry ny rafitra iray manontolo Ny loko Beige ho iray amin'ny loko maloto an'i Iran dia voafantina hamolavola ny hevitry ny tetikasa. Mipoitra amin'ny endrika boaty ny habaka amin'ny 2 color. Ireo boaty ireo dia mihidy na semi-mihidy tsy misy fikorontanana akoustic na olfactory.Amin'ny mpanjifany hanana efitrano ampy hahitana moka catwalk.Ny jiro azo antoka, ny fambolena sahaza ary ny fampiasana alokaloka mety. loko ho an'ny fitaovana hafa dia ireo zava-tsarotra lehibe.
Alahady 30 Mey 2021
Trano Fisakafoanana Amin'ny maha Shabu Shabu, ny endrika famoahana trano fisakafoanana dia manamboatra loko, mena ary fotsy mba hanehoana fahatsapana nentim-paharazana. Ny fampiasana andalana mivezivezy tsotra dia mitahiry ny mason'ireo mpanjifana amin'ny hafatra momba ny sakafo sy ny sakafo aseho. Koa satria ny sakafo kalitao no lohahevitra lehibe indrindra, trano fisakafoanana no manamboatra singa amin'ny tsenan-tsakafo vaovao. Ireo fitaovana fananganana toy ny rindrina simenitra sy gorodona dia ampiasaina hanamboarana ny tontolon'ny tsena amin'ny kaontin-tsakafo lehibe vaovao. Ity fanamboarana ity dia manitsy ny hetsika fividianana tsena tena izy izay ahitan'ny mpanjifa ny kalitao sakafo alohan'ny hanaovana safidy.
Ny Fivarotana Zavakanto
Asabotsy 29 Mey 2021
Ny Fivarotana Zavakanto Ny mahaliana dia misy sehatra fivarotana an-tserasera mifamatotra amin'ity fivarotana ara-batana voalohany ity amin'ny fampisehoana ny fisafidianana ny lamaody, famolavolana, vokatra vita amin'ny tanana ary asa tanana. Mihoatra noho ny fivarotana mahazatra mahazatra, i Kuriosity dia natao ho toy ny traikefa faran'izay mihetsika izay ampiana ireo vokatra aseho, miaraka amina haino aman-jery mifampizara manankarena mba hanintonana sy hifanerasera amin'ny mpanjifa. Ny fandefasana tabilao tsy manam-paharoa an'i Kuriosity dia manova ny loko manintona ary rehefa mandeha ny mpanjifa, ny vokatra miafina ao anaty boaty ao ambadiky ny vavahadin-tsarintany toa tsy manam-petra dia manasa azy ireo hiditra.
Ny Tranobe Mifangaro
Zoma 28 Mey 2021
Ny Tranobe Mifangaro Gaia dia eo akaikin'ny tranoben'ny governemanta antenaina vaovao izay mampiditra ny fijanonana metro, toeram-pivarotana lehibe, ary zaridainan'ny tanàna lehibe indrindra. Ny tranobe mifangaro miaraka amin'ny hetsika sculptural dia misintona ho an'ny mponin'ny birao ary koa trano fonenana. Mitaky sinema efa novaina eo anelanelan'ny tanàna sy trano. Ny fandaharana isan-karazany dia manetsika ny lamba eo an-toerana mandritra ny tontolo andro, ka lasa loharanom-pahalalana izay mety tsy ho ela dia ho toerana mafana.
Ny Biraon'ny Varotra
Alakamisy 27 Mey 2021
Ny Biraon'ny Varotra Ny famolavolana ity tetik'asa ity dia manana fomba fiasa tokana hampiasa ny Metal Mesh ho vahaolana amin'ny tanjona azo ampiharina sy aesthetics. Ny Mesh Metal lentika dia mamorona lay eo amin'ny tadin'ny lamba izay afaka manasarotra ny sisintany eo anelanelan'ny anatiny sy ivelany ety ivelany. Ny halalin'ny habaka noforonin'ny lay mitambatra dia miteraka ambaratonga ara-pahamasinana avo lenta. Ny metaly vy vita amin'ny vy vita amin'ny polish dia miovaova eo ambanin'ny toetrandro sy ny vanim-potoana iainany. Ny fandinihana sy ny fandikana ny mavesatra miaraka amin'ny haingo kanto dia miteraka habaka ZEN tokana ZEN.
Aix Arome Cafe Ny Kafe Asabotsy 19 Jona
Wuhan Pixel Box Cinema Ny Sinema Zoma 18 Jona
Opx2 Fametrahana Optic Alakamisy 17 Jona
Fanadihadihana famolavolana ny andro Asabotsy 19 Jona
Tantara momba ny andro Zoma 18 Jona
Famolavolana ny andro Alakamisy 17 Jona
Mpamorona ny andro Alarobia 16 Jona
Ekipa mpamorona ny andro Talata 15 Jona
Ny Trano Fonenana Salon Hatsarana Trano Fisakafoanana Ny Fivarotana Zavakanto Ny Tranobe Mifangaro Ny Biraon'ny Varotra